Damu Jadiid oo noqotay dawladii ugu socodka Badneyd gudaha uguna saameynta yar- Maxay tahay sababtu?
09 Febraury 2013 Waagacusub.com- Dawladda uu Hogaamiyo Madaxweyne Hassan Mohamud Alasow, Raísulwasarena ka yahay Mr Saacid, gudoomiye Baarlamaana Dr Jawaari ayaa la inay tahay dawlad masuuliyiinta hogaaminaysa yihiin dad wadaniyiina maadaama ilaa hadda uusan banaanka usoo bixin khilaaf dhexdooda ah. Dawladaan oo rabta inay muujiso inay tahay dawlad shaqeynaysa ayaa madaxweynaheeda, Raisul wasaaraheeda iyo qeyb ka mid ah wasiiradeeda ayaa noqotay dawladii ugu tegida badneyd Gobolada Soomaaliya hadana dhinaca kale waxay noqotay dawladda ugu saameynta yar gobolada ay booqato.
Madaxda Dawladaan iyo wasiiradeedaba ayey muhiimadoodu tahay inay tagaan qaar ka mida caasimadaha iyo degmooyinka Gobolada Dalka sida Beledweyne, Baydhabo, Garbahaareey, Marka, Afgooye, Jawhar, Balcad iyo qaar kale, madaxdaan ayaan wax saameyn ah ku yeelan siyaasadaha iyo awoodaha ka jira Magaalooyinka ay tagaan inta badan, maadaama madaxda dawladaani aysan is weydiin safaradooda ka hor meesha ay tagayaan siyaasadaha ka jira, cida maamusha, cida ay ku xiran yihiin, sidii ay saameyn ugu yeelan lahaayeen meelaha ay tagaan siyaasiyiinta iyo shacabka ku nool.
Madaxda Dawlada Federalka Somalia ayaa ku qanacsan inay ka khudbeeyaan magaalooyinka dibna ugu laabtaan Magaalada Xamar. Madaxda Dawlada magaalooyinka ay tagaan waxay xaflado ugu soo xiraan ciidamo lagu sheegay ciidamada Qaranka oo ah ciidamo beeleedyo aysan ogeyn noocyada tababarka ay qaateen iyo cida maalgelisayba.
Ma jiro ciidan dawladda Soomaaliyeed leedahay ee ilaaliya Madaxda dawlada Somaaliya, wasiiirada, Xildhibaanada, Gudoomiyayaasha degmooyinka, Gobolada, cid kastaahi oo ay magacaawdo xukuumadaani waxaa ay ciidan ka soo kaxaysataa milateriga ama Booliiska dawladda ciidamada lagu sheego, sidoo kale qaarkood maliishiyaad beelahooda ah ayay u geliyaan Tuutaha ciidanka Dawladda, wuxuuna tuutaha ka dhigan yahay astaan ay isku yaqaan Madaxda Dowladda iyo Ciidamadda.
Dawlada waxay ku guul dareysatay in Ciidamo gaara u samayso Xafiisyada Hayadaha UN-Ka, Safaaradaha sida Special Police Unit-ka ka hawlgala Somaliland iyo Jubbaland oo ilaaliya Xafiisyada iyo Shaqaalaha hayadaha UN-ka iyo hayadaha kale ee Caalaamaiga ah, Ciidankaas oo ay hayaduhu bixiyaan gunooyinkooda iyo qalabkooda. Haatan oo Safaaradaha iyo Hayadaha UN-ka loo rarayo Muqdisho waxaa hay''adaha UN-ka ilaaliya Kambaniyo lagu sheegay Private Security oo shaqsiyaad leeyihiin, Kambaniyadaas oo Calaamadoodu tahay kaliya Dhar UNIFORM ah balse aysan jirin awood ama la socosho dawladda Soomaaliya la socoto. Kambaniyadaan ayaa wata inta badan hub ka culus kan ciidamada dawladda .
Isku soo wada duube waxaa Magaalada Muqdisho kaaga muuqanaya shacabkii oo u hamuun qaba Dawladnimo, Umaddii oo Dalka dib u dhisaysa iyo Dawlad aan waxba la socon balse waqtigu saaciday maadaama uu Alshabaab jabay.
Laamaha Dawladda intooda badan waxaa gacanta ku haaya dad qaarkood isu mooda meesha inay iyagu leeyihiin, masuuliyiin musuqmaasuq dilooday, kuwo qaarkood ceeb ku ah qaranka Soomaaliyeed.
Masuuliyinta Dawladda ee muqdisho waxaa ugu shaqo badan Gudoomiye Tarsan, ciidanka Ilaaliya waa beeshiisa, Ma xukumo si dhab ah masuuliyiinta maamula degmooyinka Gobolka Banaadir.